जनताले तिरेको करबाट भात , भत्ता र कुर्सी पड्काएर तीनै जनतालाई पाखे भन्न लाज लागेन? – Dainik Sangalo
September 23, 2020 709
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा यति बेला आलोचनाको केन्द्र बनिरहेका छन्। पहिल्लो पटक एक अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनी आलोचित भइरहेका हुन्।
थापाले मंगलबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कुलमान घिसिङको विषयमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उक्त कार्यक्रममा उनले कुलमान घिसिङका कारण नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्नेहरुलाई पाखेको संज्ञा दिएका थिए। पत्रकार धमलालेले कुलमानजीकै कारण नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो नि ? भनेर प्रश्न सोध्दा थापाले त्यस्तो बताएका थिए। उनले भनेका थिए ,‘त्यसो भन्नेहरु पाखे हुन् । उहाँहरुको त्यो सन्तुलित विचार, बुझाई र दृष्टिकोण होईन् ।’ साथै उनले कुलमान भगवान नभएको पनि बताएका थिए।
“कुलमानजी भगवान होईन, उहाँ मानिस हो । तपाईं मानिस हो । म मानिस हो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू मानिस हो । कुलमानजीपनि मानिस हो । जनताले सडकमा उत्रिएर भगवान भनेपनि हामीले भगवान भन्छौं त । हामी मान्छे हो ।”,उनले भनेका थिए। यसरी जनतालाई पाखे भनेका कारण अहिले उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक संजालमा उनी माथि गालीका वर्षात भइरहेका छन्।
थापाको अभिव्यक्तिको सामाजिक अभियन्ताहरुले पनि चर्को आलोचना गरेका छन्। सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले थापालाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन चेतवानी दिएका छन्। जनतालाई पाखे भन्ने अधिकार थापालाई नभएको भन्दै उनले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन चेतावनी दिए।
यस्तै अर्की सामाजिक अभियानता ज्वाला संग्रौलाले पनि थापाको आलोचना गरेकी छन्। जनताले तिरेको करबाट उठेको पैसाले भात , भत्ता र कुर्सी पड्काएर तिनै जनतालाई पाखे भन्न सरम लागेन भन्ने उनको थापालाई प्रश्न छ।
Prevप्रहरी निरीक्षक शान्ता वाइबा सिन्धुली जिल्लाकै सर्वोकृष्ट प्रहरी
खाडीमा रहेका नेपालीले पठाएको ५६० अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल आइपुग्यो,,,
भारतमा एकैदिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ४० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित
भारतमा कोरोनाबाट २४ घण्टामा ३८६ जनाको मृत्यु, एकैदिन थपिए ११ हजार भन्दा बढि संक्रमित